Nin ka tirsan Shabaab oo hoygiisa laga helay qaraxyo oo Baydhabo lagu xiray (SAWIRRO) – STAR FM SOMALIA
Nin ka tirsan Shabaab oo hoygiisa laga helay qaraxyo oo Baydhabo lagu xiray (SAWIRRO)
Ciidamada Sirdoonka Koonfur Galbeed, ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen nin ka tirsan Ururka Al Shabaab, ka dib markii ay hawlgal qorsheysan ku galeen hoyga uu ka degan yahay Magaalada Baydhabo.
Ciidamada, ayaa Jimcihii isu gadaamay hoyga ninkaasi oo ku yaala xaafadda Berdaale, ka hor intii aanay gudaha u gelin, waxayna si nabdoon gacanta ugu soo dhigeen ninkaasi iyo qaraxyo ay ka helayn hoygiisa.
Ciidamada Nabad Suggida, ayaa waxay ninkaasi u kaxeeyen mid ka mid ah xarumaha ay ku leeyihiin Magaalada Baydhabo, halkaasoo ay su’aalo ku weydiinayan Saraakiisha Nabad Suggida, kuwooda u tababaran baaritaanada.
Xasan Xuseen Maxamed (Eelaay), Wasiirka Hub Ka Dhigista & Dhaqan-celinta Maleeshiyada ee Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa Ciidamada Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), qaybtooda Koonfur Galbeed ku ammaanay tallaabada ay ku soo qabteen ninkaasi.
Wasiirka, ayaa tilmaamay in ninkaasi uu Magaalada Baydhabo ku dhex watay mooto bajaaj ay Shabaabku u iibiyeen, si hubka iyo qaraxyada uu isugu kala gudbiyo gudaha magaaladaasi.
Wasiirka, ayaa intaa ku daray in ninkaasi uu Saraakiisha Nabad Suggida u sheegay in uu ka qayb qaatay qaraxyo, ay Shabaabku ka gaysteen Xarunta Gobolka Baay ee Magaalada Baydhabo.
Xasan Eelaay, ayaa hoosta ka xariiqay in ninkaasi loo soo bandhigi doono Saxaafadda, kolka ay baaritaanada soo afjaraan Saraakiisha Nabad Suggida.
Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida Baydhabo, Maxamed Isaaq Ibraahim (Aflow), ayaa waxaa uu shaaca ka qaaday in ninkaasi uu u sheegay rag kaloo Shabaabka ka tirsan, oo ay wada shaqaynayeen.
Taliyaha, ayaa ku waramaaya in Ciidamada Nabad Suggida ay wadaan hawlgalo ay ku baadigoobayan xubnaha ka tirsan Shabaab, oo isu deyaaya buu yiri inay ka baxsadaan gacanta sharciga, balse ay ku dadaali doonaan, sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayen.
Taliyaha, ayaa sheegay in ninka ay qabteen oo lagu magacaabo Isaaq Xasan Cali, 28 jir ahna uu u taagnaa daadinta dhiigga shacabka reer Baydhabo, laakiin ay dadku ku mahadsan yihiin soo sheegitaankiisa.
Aflow, ayaa wuxuu dadka reer Baydhabo ku booriyay inay xoojiyan wada shaqaynta ay la leeyihiin laamaha ammaanka, si ay uga wada hortaggan nabadiidka, maadaama aysan kala jecleen inay dhibaateeyan Ciidamada Qaranka iyo shacabkaba.
Aflow, ayaa dadka reer Baydhabo xusuusiyay nabadda maanta ka jirta Baydhabo in lagu gaaray wada shaqaynta ay la leeyihiin hay’adaha amniga, si nabadda ay u waartana looga baahan yahay inay sii wadaan wada shaqayntooda.
Abshir Bukhaari oo noqday Xildhibaankii u horeeyay ee Aqalka sare loo doorto
Maxkamadda sare ee Ingiriiska oo cadeyn u weysay eedeymo loo jeediyay Shirkadda Soma Oil
Wararka40 mins ago
Wararka47 mins ago
Wararka54 mins ago
Wararka56 mins ago